अख्तियारका अहिलेसम्मका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
अख्तियारका अहिलेसम्मका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि ?
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार १७:२३:००
काठमाडाैँ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे निकै ठूलो बदनामी कमाएर त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । विगतका प्रमुख आयुक्तको भन्दा बढी अपेक्षा गरिएका पूर्वप्रशासक घिमिरेले यस शक्तिशाली संवैधानिक आयोगलाई झन् धेरै दुरुपयोग गरे र संस्थाको शाख झन् गिराए ।
यसअघि ललितबहादुर लिम्बु, लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातले यस संस्थालाई संस्थागत गुण्डागर्दीकै तहमा सञ्चालन गरेका थिए । लिम्बु र बस्न्यातले आफ्ना विगतका कर्तुत ढाकछोप गर्ने र यस संस्थामा रहेर थप रकम असुलीको धन्दा चलाए । आफ्नो आर्थिक लाभका निम्ति यो संस्था त प्रयोग गरे नै, साथै यसको डर देखाएर राज्यका संयन्त्रलाई समेत आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गरे ।
लोकमानसिंह कार्कीले त सारा संयन्त्र नै कब्जा गरे । राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई आफ्नो काबुमा राख्ने प्रयत्न गरे । आफ्नो इशारामा चल्न नमान्नेहरुलाई बयानमा बोलाउने, तेह्र पाने फाराम भराउने र उस्तै परे मुद्दा समेत चलाउने गरे । लोकमानका क्रियाकलापमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल र डीआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ समेत सहयोगी एवं सदस्य बने ।
लोकमानले भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायलाई समेत आफ्नो स्वार्थमा परिचालन गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति परिचालन गरेका थिए । उनको आदेश र निर्देशन कसैले अटेर अवस्था थिएन ।
लोकमान समूहले अख्तियारमा बसेर कसरी गोरखधन्दा चलाएको थियो भन्ने उदाहरण अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठक पनि हुन् । चाँगुनारायणको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति विवादमा गरेको बार्गेनिङ र घूस प्रकरण बाहिर आएको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।
लोकमानका पालामा सरकारी कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मलाई धरपकड गरेर उठाउने, अपहरण शैलीमा अख्तियारको कार्यालयभन्दा बाहिरै सेफ हाउसमा लगेर यातना दिने र रकम असुल्नेजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप अख्तियारबाटै भएका थिए । यसको अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको भागीदार बनाइएन भने जिम्मेवार पदमा पुग्नेहरुलाई पुस्तौँसम्म पोलिरहनेछ ।
नवीन घिमिरेले पनि अख्तियारको साख उठाउने कुनै काम गर्न सकेनन् । सानातिना पाँच सय रुपैयाँदेखि हजारसम्मका घूस प्रकरणलाई देखाएर अख्तियारको उपस्थिति जताउने, ठूल्ठूला प्रकरण ढाकछोपतिर लाग्ने रवैया उनले देखाए । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरिदमा गरेको घोटाला सबैसामु छर्लंग छ । संसदीय समितिले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले डेढ अर्बभन्दा बढीको घोटाला भनेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्न सकिने प्रक्रिया छलेर भीर, पाखा र बगर कौडीको भाउमा किनेर एउटै कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीका नाममा अलगअलग प्रस्ताव दर्ता गराई मिलेमतोमा तिनैमध्येबाट एउटा छानिएको छ । अनि नवीन घिमिरेका आफन्त तिनै मध्येका एकजनाको कम्पनीमा उच्च पदमा जागिर गर्छन् ।
आफू र आफन्तसँग जोडिएका भ्रष्टहरुलाई जोगाउने गरी फाइल नै तामेलीमा राख्ने अनि दुईचार सय रुपैयाँ घूस लिएवापत महिनौँसम्म अख्तियारको हिरासतमा यातना सहनुपर्ने कस्तो न्याय हो ? के अख्तियार स्थापनाको उद्देश्य यही हो ?
आफ्नो र आफूलाई नियुक्ति दिनेहरुको स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा अख्तियारको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने यो संस्था राखिरहनुको के औचित्य छ ? यो संस्थाले किन पनि संवैधानिक मर्मअनुसार काम गर्न सक्दैन भने नेताहरुले आफ्नो पूर्वसम्बन्धका आधारमा वा स्वार्थ समूहको सिफारिसमा पूर्वप्रशासकलाई यहाँ नियुक्ति दिन्छन् ।
यसले गर्दा प्रथमतः, नियुक्ति खानेहरु दिनेप्रति वफादार हुन्छन् । दोस्रो, नियुक्ति खानेहरु स्वयं हिजो तिनै भ्रष्ट निकायमा हालीमुहाली गरेका हुन्छ । तिनको स्वार्थको जालोले अहिले पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।
तेस्रो, नोकरशाहहरु जति नै आँटिला भए पनि शक्तिको अगाडि घुँडा टेकेकै हुन्छन् । आफूभन्दा माथिल्लो तहको अत्यधिक चाकडी गर्ने र आफूभन्दा तलकोलाई अत्यधिक पेल्ने यसको स्वभाव हुन्छ । ठूला माछा किन उम्किइरहेका छन् र साना मात्र कसरी बल्छीमा परेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँनिर भेटिन्छ ।
अनि यो ठाउँमा इमानदार र आत्मसम्मानयुक्त व्यक्ति पुग्दैन । जो चाकडी चाप्लुसीमा रमाउँछ, जसको विगत दागपूर्ण छ तिनीहरु नै पुग्छन् । त्यस्ताबाट निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो । त्यसैले पनि एकपछि अर्को गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाइरहेका छन् ।
यदि यो संसद र केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग आँट छ भने अहिलेसम्मका अख्तियार पदाधिकारीको सम्पत्ति र कारोबारको छानबिन गर्नुपर्छ । ललित लिम्बु, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात, नवीन घिमिरेदेखि त्यहाँका आयुक्त र सुडान घाेटालाकाे मुद्धा चलाउने भगवती काफ्ले सहित अहिलेसम्मका सचिवहरुको समेत सम्पत्ति र कारोबारको वैधता जाँच्ने हो भने यथार्थ आफै बाहिर आउनेछ ।
राज्यका संस्थाको शक्ति दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभहानि मात्रै होइन, गुण्डागर्दीकै तहमा उत्रिनुको भनेको सामान्य प्रकारको अपराध होइन । त्यसैले पनि यिनीहरुलाई कानुको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । यदि अहिलेको सरकार र यी नेताहरुले यो आँट गरेनन् भने उनीहरुको समेत मिलेमतोमा सबै हर्कतहरु भइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।